Izindaba - YIWU, China, May 12, 2020 / PRNewswire / - NgoMeyi 10, 2020, umcimbi waku-inthanethi we-2020 China Brand Day uqaliwe.
I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - NgoMeyi 10, 2020, umcimbi waku-inthanethi we-2020 China Brand Day uqaliwe. Njengomcimbi obalulekile wokufaka uphawu lokubeka uphawu minyaka yonke emakethe ye-Yiwu, umncintiswano wabathengisi iYiwugo Top 10 nawo uqalise ngokusemthethweni inqubo yokuvota.
Umncintiswano, obubanjelwe ngempumelelo unyaka wesishiyagalombili olandelanayo, wethule izinhlobo eziningi zezimpawu zokuhweba zangaphandle, ezinjengeHailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion Jew jewelry, Zongxin Canvas Shoes, neBAOLA, njll Ukusiza kangcono abathengisi basungula ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi babonisa amandla abo omkhiqizo, uYiwugo wenze ushintsho oluthile ohlelweni lwemiklomelo. Ngenkathi uqhubeka nokukhetha "Abathengisi abaphezulu abayi-10", lo mncintiswano uzophinda futhi ufake "Abadayisi Abaphambili" abayi-10, ama-80 "Model Vendors" kanye nama-120 "Elite Vendors". Kuyaphawuleka ukuthi, ngokufika kwe- "Live Streaming Era for All", kuklonyeliswe indondo ye- "Top 10 Influencers" ohlelweni lwemiklomelo yomncintiswano walo nyaka, ngenhloso yokuvumela abathengisi ukuthi babonise izithombe zabo zenkampani futhi imikhiqizo ngokusakazwa bukhoma, ngaleyo ndlela ihehe ukunakwa kwabathengi emhlabeni jikelele ngendlela ecace kakhudlwana. Inqubo yokuvota izoqala ngoMeyi 10, 2020 igcine kuze kube nguDisemba 31, 2020. Imiphumela izomenyezelwa ngemuva kukaJanuwari 1, 2021.